Hydralazine HCL ntụ ntụ (304-20-1) hplc ma98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Hydralazine HCL ntụ ntụ
SKU: 304-20-1. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Hydralazine HCL powder (304-20-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Hydralazine HCL ntụ ntụ bụ vasodilator nke na-arụ ọrụ site n'inwe ahụ ike na arịa ọbara gị iji nyere ha aka ịmalite (gbasaa). Nke a na - ebelata ọbara mgbali ma na - enye ọbara ohere ka ọ na - erute ngwa ngwa site na veins na akwara.
Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ
Hydralazine HCL ntụ ntụ isi agwa
aha: Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ
Molekụla Formula: C8H9ClN4
Ọbara arọ: 196.64
Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ na ojiji
Aha aha: Apresoline
Aha njirimara: Hydralazine HCL powder (pronunciation: hye DRAL a zeen)
Hydralazine HCL ntụ ntụ eji
A na-eji mmanụ aṅụ Hydralazine HCL emeso ọbara mgbali elu. Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ dị na ọgwụ ndị a na-akpọ vasodilators. Ọ na-arụ ọrụ site na ịkwado arịa ọbara ka ọbara nwee ike ịbawanye ngwa ngwa site na ahụ.
Ọbara mgbali elu bụ ọnọdụ nkịtị ma ọ bụrụ na a naghị emeso ha, nwere ike imebi ụbụrụ, obi, arịa ọbara, akụrụ na n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ. Mmebi nke akụkụ ndị a nwere ike ibute ọrịa obi, ọrịa obi, nkụda obi, ọrịa strok, akụrụ akụrụ, ọhụụ ọhụụ, na nsogbu ndị ọzọ. Na mgbakwunye na ịṅụ ọgwụ, ime mgbanwe ndụ ga-enye aka ịchịkwa ọbara mgbali gị. Mgbanwe ndị a na-agụnye iri nri na abụba nnu na nnu, ịnọgide na-enwe ahụ ike, na-eme ma ọ dịkarịa ala minit 30 ọtụtụ ụbọchị, ọ bụghị ịṅụ sịga, na iji mmanya na-aṅụbiga mmanya ókè.
Kedu ihe bụ Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ
Ọbara mgbali elu na ndị okenye:
Amalite ọgwụgwọ na obere ala ma jiri nwayọọ nwayọọ na-adabere na nzaghachi onye ọ bụla. Usoro nchịkọta ndị a na-atụ aro mbụ bụ 10 mg ugboro anọ kwa ụbọchị maka 2 mbụ na 4 ụbọchị, mụbaa na 25 mg ugboro anọ kwa ụbọchị maka izu nke izu mbụ.
Maka izu nke abụọ na nke sochirinụ, mụbaa ụbụrụ na 50 mg ugboro anọ kwa ụbọchị (mmụba ngwa ngwa site na 10-25 mg / dose nwayọọ nwayọọ kwa ụbọchị 2-5).
Ọnụ ọgụgụ kachasị ụbọchị a na-eji eme ihe na ọmụmụ ihe ọmụmụ bụ 300 mg.
Mkpụrụ obi obi nkasi obi:
Ntinye mbụ maka ịgwọ ọrịa obi bụ 10 ka 25 mg na 3 na 4 ugboro ugboro kwa ụbọchị.
Ụdị nke mbụ bụ 225 na 300 mg kwa ụbọchị na 3 ka 4 kewara ụzọ.
Maka ọgwụ mgbochi ọrịa hypertensive, ọgwụ ahụ bụ 0.5 mg / Kg IV n'oge ọ bụla 4 awa.
Otú Hydralazine HCL si arụ ọrụ
A na-eji hydralazine HCL ntụ ntụ mee ihe banyere ọbara mgbali elu (ọbara mgbali elu). A na-ejikwa ya ịchịkwa ọbara mgbali elu na nne n'oge ime ime (pre-eclampsia ma ọ bụ eclampsia) ma ọ bụ ọnọdụ mberede mgbe ọbara mgbali elu dị elu (hypertensivecrisis).
Ọbara mgbali elu na-agbakwụnye na arụ ọrụ nke obi na akwara. Ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu ruo ogologo oge, obi na akwara nwere ike ghara ịrụ ọrụ nke ọma. Nke a nwere ike imebi arịa ọbara nke ụbụrụ, obi, na akụrụ, na-akpata ọrịa strok, obi mgbawa, ma ọ bụ akụrụ akụrụ. Ịdọrọ ọbara mgbali elu nwere ike ime ka ihe mgbu nke obi na ọrịa strok nwere.
Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ na-arụ ọrụ site n'ịkwado arịa ọbara ma na-amụba ọbara na oxygen n'obi mgbe ọ na-ebelata ọrụ ya.
Ikwesighi iji ọgwụ a mee ihe ma oburu na Hydralazine hydrochloride kpoo gi, ma oburu na enwere oria akwara ogwu, ma o bu oria obi ojoo na-emetuta valve.
Tupu iwere Hydralazine HCL powder, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa akụrụ, lupus, angina pectoris (obi mgbu), maọbụ ọ bụrụ na ị nwetụla ọrịa strok.
Ka ị na-ewere Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ, zere ịdị ngwa ngwa na ịnọdụ ala ma ọ bụ ịgha ụgha, ma ọ bụ ị nwere ike iche na ọ dị nro. Bilie nwayọọ nwayọọ ma kwado onwe gị iji gbochie ọdịda.
Kpọọ dọkịta gị n'otu oge ma ọ bụrụ na ị nwere mmetụta dị oke egwu dịka ngwa ngwa ma ọ bụ na-egbuke egbuke, mgbapụta, nkwụsị ma ọ bụ tingling, mmiri na-acha uhie uhie, mmetụ ahụ ma ọ bụ ikpo ọkụ na ahụ ọkụ, obi mgbu, ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike gwụrụ, na urinating less than usual ma ọ bụ ma ọlị.
Iji jide n'aka na ọgwụ a na-enyere ọnọdụ gị aka ma ọ bụghị na-akpata nsogbu ndị na-emerụ ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ị nyochaa ọbara ọbara gị mgbe mgbe. Ị nwekwara ike ịnweta ule ọbara mgbe ụfọdụ. Echefula ndokwa ọ bụla edere.
Na-eji Hydralazine HCL ntụ ntụ dịka a gwara gị, ọ bụrụgodị na ọ dị gị mma. Mbara ọbara mgbali elu enweghi ihe mgbaàmà, yabụ na ị gaghị ama mgbe ọbara mgbali elu gị dị elu. Ọ dị gị mkpa iji ọgwụ mgbali elu mee ihe maka oge ndụ gị niile.
Hydralazine hydrochloride nke ntụ ntụ
Hydralazine hydrochloride ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
ngwa ngwa ma ọ bụ na-agbaji obi obi;
ọ na-ekpuchi ihu, afo, aka, ma ọ bụ ụkwụ;
ụfụ, ọkụ, ihe mgbu, ma ọ bụ obi ụtọ;
enwe mmetụta dịka ị nwere ike ịpụ;
mgbagwoju anya, echiche ma obu omume di iche iche;
akpụkpọ anụ ahụ, ọnyá dị nhịahụ;
ihe mgbu ma obu nke siri ike;
urine na-acha ọbara ọbara;
urinating obere ka ọ dị ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọlị; ma ọ bụ
nkwonkwo nkwonkwo ma ọ bụ ọzịza na ahụ ọkụ, obi mgbu, ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike gwụrụ.
nausea, vomiting, ọnwụ nke agụụ;
afọ ọsịsa, afọ ntachi;
akwara ma ọ bụ nkwonkwo nkwonkwo;
imi ma ọ bụ imi; ma ọ bụ
mgbu ma ọ bụ akpụkpọ anụ.
Ụzọ ịzụta Hydralazine HCL ntụ ntụ si AASraw
Hydralazine hydrochloride Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ:
Hydralazine HCL (304-20-1): Ọrụ & Ụdị & Akụkụ Na-emetụta
Hydralazine HCL (304-20-1) ji agwọ ọbara mgbali elu